Alarobia, Jolay 21, 2010 Talata, Oktobra 4, 2011 Lorraine Ball
Ny mpivarotra dia sady tia no mankahala ny lalao famaranana sy ny fifaninanana. Raha fitaovana mahomby amin'ny fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika sy hiteraka lisitry ny vinavinam-panantenana, mankaleo, mandany fotoana ary sarotra ny mitantana. Ka rehefa Daniel Herndon an'ny Red Wall Live Nahita hevitra mahafinaritra momba ny fampiroboroboana ny sekolinay ho an'ny mpanjifantsika Dr. Jeremy Ciano an'ny RevolutionEyes Faly be aho tamin'io hevitra io, saingy niahiahy momba ny famonoana ho faty.
Tsotra ny fifaninanana:
Ny ray aman-dreny dia mandefa ny sarin'ny zanany manao solomaso sy solomaso solomaso
Avy eo dia asain'izy ireo mifidy ny namany sy ny fianakaviany.
Ny zaza manana vato be indrindra dia mandresy mitaingina angidimby, tapakila mankany amin'ny lalao Ice ary mitaingina masinina zamboni, ary fitsidihana ny zoo ao ambadiky ny sehatra.
Ny tanjona ao ambadiky ny fifaninanana, tsy dia tsotra loatra:
Angony ny sary azontsika ampiasaina hananganana fahatsiarovan-tena momba ny fampiharana zaza tsy ampy taona
Manangana mpankafy ny pejy facebook
Angony ny adiresy mailaka
Nampatahotra ny fitondrana. Saingy ity dia vanim-potoanan'ny internet sy ny iPhone, ary misy hatrany ny "App" amin'izany. Amin'ity tranga ity dia haingana. Ny tiako momba ny fampiasana Wildfire:
Mora ihany ny nanangana ny fampielezan-kevitra. (Miankina amin'ny fotoana mety laninao amin'ny sary azonao atao ao anatin'ny adiny iray)
Manana safidy izahay: sweepstakes, tapakila, sary ary fifaninanana lahatsoratra
Atsofohy mora foana amin'ny pejin'ny mpankafy.
Tsy takiana ny Facebook -Wildfire koa dia manolotra widget tsotra fotsiny ho an'ny tranokala ary microsite azonao atoro ny mpifaninana ihany koa.
Ny interface interface tsotra dia manamora ny fanasan'ny olona ny namany sy ny fanitarana azy ireo amin'ny fomba ara-dalàna.
Mety ny vidiny. Miankina amin'ny halavan'ny fampielezan-kevitra, sy ny habetsaky ny fanaingoana ilainao, ny teti-bolanao amin'ny fitantanan-draharaha dia ho ampahany amin'ny vola lany tamin'ny fampandehanana programa tahaka izao (Nandany $ 200 ny tetibolan'ny Dr. Ciano ho an'ity programa enina herinandro ity)
Ny zavatra tsy tiako momba ny Wildfire: (Avelao hiatrika izany, tsy misy lafatra)
Fandefasana iray isaky ny solosaina - azoko ny antony, saingy manakana antsika tsy hanao sonia olona izany rehefa tonga any amin'ny biraon'ny Dr. Ciano izy ireo. Na dia afaka mizara fampahatsiahivana aza isika dia tsy ny rehetra no hody ary hanao izany. (taorian'ny nanoratako ity lahatsoratra ity dia nahita fomba iray izahay hampitomboana ny isan'ny fandefasana, ka zavatra kely kokoa tsy tianao)
Azontsika atao ny misambotra mailaka an'ny tsirairay izay mandefa, fa tsy izay rehetra mifidy. Ny tena tombony amin'ity fanentanana ity dia ny fanitarana ny lisitra fandefasa-mailaka. Noho izany dia tadiavinay ry ray aman-dreny sy ny namany sy ny mpianakaviny rehetra. Mba hanatanterahana izany dia hifindra any isika Formstack amin'ny fifidianana
Fehiny… Faly aho amin'ny Wildfire, ary hizaha toetra isan-karazany ho an'ny mpanjifa amin'ny volana ho avy. Anisan'izany ny antsika: Fanamboarana karatra Biz Efa nampiasa Wildfire ve ianao? Inona no zavatra niainanao tamin'ny vokatra?
Aza adino ny - ampidiro ny zanakao na zafikelinao handresy a mitaingina angidimby, milina zamboni sy maro hafa!
Tags: dokam-barotra amin'ny horonan-tsary